Yazi i-American Bandogge enamandla futhi enamandla - Izinhlobo
Olunye lwezinhlobo ezihlaba umxhwele kakhulu lapho kukhona umqaphi osabisayo obizwa ngokuthi I-American Bandogge / i-Bandog .
Obeye aziwe njengo I-American Bandogge Mastiff, i-American Mastiff, iSwinford Bandog, iMastiBull, noma i-American Masti-Bull , le canine ingenye yokubheja kwakho okuhle ukwethusa abangahle babe ngabangeneli.
Hlangana ne-American Bandogge
Kepha ungapheli futhi uthenge iBandogge ngokushesha okukhulu. Ngabe ucabanga ukuthi unayo yini edingekayo ukuze ube ngumnikazi wayo? Qhubeka ufunde ukuze uthole.
Ingabe i-Bandog ifana ne-Pit Bull?
Ibukeka kanjani iBandogge?
Ingabe ama-Bandogs ayingozi?
Ukunakekela i-fido enkulu
Uhlala isikhathi esingakanani uBandogge Mastiffs?
Ukuthenga umdlwane: Ingabe ama-Bandogs awekho emthethweni?
Isinqumo: I-American Bandogge yisilo esesabekayo
Cha, akunjalo. Ama-bandogges angama-hodgepodges wokusebenza nokuqapha izinhlobo . Banomlando omude osukela ku 1200s futhi kuthiwa zivela eYurophu, lapho abagcini bamageyimu babasebenzisela ukuzingela nokulwa.
Eqinisweni, i- “Bandog” igama lesiNgisi Esidala elisho “iketanga.” Leli gama laba yingxenye yaleli gama lohlobo, njengoba amaBandogges amaningi okuqala ayegcinwa eboshwe ngamaketanga emini futhi akhululwe ebusuku ukuvikela izizathu.
Dlulisa phambili emakhulwini amaningi eminyaka kamuva ku 1960s , lapho uJohn Swinford, udokotela wezilwane waseMelika, ezama ukulinganisa uhlobo.
Wawela i-American Pit Bull Terrier nge-Neapolitan Mastiff. Umgomo - ukwakha inja yokugcina yokuqapha .
Ama-Bandogges esimanje angaba yingxube yamagazi amaningi kaMolosser, afaka:
Isikhonzi ( IsiNgisi noma I-Neapolitan )
I-American Pit Bull Terrier
Ukuzama ukuqhamuka negama lohlobo elihlanganisa wonke la mathuba kuyimpi yokuhlulwa. Esikhundleni salokho, i- 'American Bandogge' yigama lesambulela se-catchall elibhekisela inhlanganisela yanoma iyiphi yalezi zinhlobo .
Kungakhathalekile uhlobo oluthile lofuzo lweBandog, baqinisekisiwe ukuthi babe okukhulu , i-canine ebusayo .
Banedumela elibi futhi basetshenziselwa ukulwa kwezinye izingxenye ze-US, kepha iqiniso ukuthi iMasti-Bull enomnikazi ofanele angaba ngumngane omnene, nothando .
Ubucabanga ukuthi ukuzalaniswa okuvamile njalo kungalindelekile? I-American Bandogge ithatha ikhekhe. Kukhona cishe akunakwenzeka ukunquma ukuthi bazobukeka kanjani ngaphandle kokuhlangana nabo.
Uboya beMastiBull bungakhiwa yinoma iyiphi inombolo yemibala. Okuvamile kakhulu i-brindle, eluhlaza okwesibhakabhaka noma i-merle, i-fawn, ebomvu, yegolide, nomnyama. Okwabo amajazi amafushane, amabi imvamisa kuthintwa okumhlophe okuxubene, kepha iphethini ngqo ayihleliwe ngokuphelele.
Ngenkathi izici ezithile zingenakwenzeka ukubikezela, isakhiwo somzimba jikelele seMelika Mastiff siqinisekile kakhulu.
Bajwayele ukuba imizimba elandelwe kahle, engunxande . TO isifuba esibhonya futhi amahlombe abanzi nikeza i-Bandog ubukhona obukhulu.
Izindlebe zazo ezingunxantathu zihlala phezulu kwekhanda le-boxy, futhi amakhala abo angaba mnyama noma abomvu, ngamehlo abanzi futhi amnyama. Ngakolunye uhlangothi, umsila omncane we-MastiBull uthinta iphuzu.
Usayizi: Abakhulu kangakanani ama-American Bandogge Mastiffs athola?
Ama-bandogs akhona okukhulu kakhulu. Abesilisa ngokuvamile banesisindo sokushaya Amakhilogremu ayi-100 kuya kwayi-140 (45 to 64 kg) bese uyama Amasentimitha angu-19 kuya kwangu-30 (48 kuya ku-76 cm) ubude.
Abesifazane abafushane kakhulu kunabesilisa, kodwa bayancika, banesisindo esilinganisweni Amakhilogremu angama-85 kuye kwayi-100 (39 kuya ku-45 kg).
Ngaphandle kwesimo sabo sokuzala izinja se-XXL, amaBandogges kunganeliswa emafulethini noma emakhaya amancane , kodwa kuphela uma zisetshenziswe ngokwanele.
Cabanga nge-American Mastiff njengenguqulo ye-canine kaDkt Jekyll noMnu Hyde. Nemindeni yabo, lezi zinja zithambile futhi zinomusa. Kubantu ongabazi nezinsongo ezingaba khona, banolaka olubi impela .
Isimo sabo sengqondo singashintsha ngokuphazima kweso uma bezwa noma yini esolisayo.
Ungamangala futhi ukwazi ukuthi amaBandogges yiwo kuhle nezingane ngenxa yemvelo yabo evikelayo, enembile. Baziwa njengabantu abanakekela izingane, abahola iziteketiso ezifana ne- 'Mama Bear' kanye 'noMgcini Wokuthula Othule.'
Ngendlela ebucayi ngayo i-Bandog yakho engazama ngayo, azikwazi ukuzenza zibe zincane. Usayizi wabo omkhulu wandisa amathuba okuthi izingane zingalimala ngesikhathi sokudlala.
Kungcono ukugada lokhu kuxhumana futhi ufundise abancane bakho indlela yokuphatha le fido enkulu ukugwema izingozi.
IMastiBulls ivame ukuzwana nezinye izilwane ezifuywayo - uma zikhuliswe ndawonye futhi zihlangana kahle nabantu. Bukela lawa ma-American Bandogges amahle ajabulela iseshini yokudlala ntambama ndawonye!
Kodwa ungalindeli ukuthi i-Bandog yakho ibe nobungane nabantu abangaziwa noma izilwane ezifuywayo.
Isiqubulo sale doggo sithi “ luma kuqala, buza imibuzo ekugcineni . ” Zalelwe ukuvikela nokuvikela, bayindawo futhi banesibindi . Ababuyeli emuva kalula, futhi ngeke banqikaze ukuthatha isinyathelo ngokusongela.
Ama-American Bandogges adume kabi ngokunganaki ingxenye yamagxolo nokubamba. Empeleni, lezi zinja ungakhonkothi kakhulu . Ngamanye amagama, kungahle kungabikho isixwayiso ngaphambi kokuba bahlasele.
Lokhu akulona ngempela iphutha kubo. Izinja zokuqapha kufanele zikwazi ukucabanga ngezinyawo zazo, ngemuva kwakho konke. Kusho, noma kunjalo, ukuthi abanikazi bama-novice kufanele baziqhelanise nalolu hlobo .
Ama-workaholics angafuna ukucabanga kabusha ngokuthola le canine, futhi. Ama-bandogges athola igama lawo ekuboshweni ngamaketanga usuku lonke, kepha iqiniso ukuthi lolu hlobo aluhlali lodwa.
Ukuthambekela kolaka noma okonakalisayo kwesilwane sakho kungabhebhetheka uma eshiywe yedwa kaningi.
Ungayiphatha kanjani i-American Bandogge Mastiff
Ama-bandogs aqhutshwa futhi ahlakaniphile, kodwa ukuzimisela kwawo ukujabulisa kusuka ku 'ukukhohlisa ngokuphelele' kuya ku-alpha evelele. '
Banikezwe usayizi wabo kanye nemvelo yokuvikela, bona kudinga umakadebona wezinja . Ngaphandle kokuqeqeshwa nokuphathwa okufanele, lawa ma-canines angaba nolaka futhi kube nzima ukuwalawula.
Bathanda ukunakwa kepha badinga igunya . Sebenzisa ukuqiniswa okuhle ukuze usebenzise ngokugcwele lokhu. Lapho umfundi wakho kufanele asebenze ukuphatha nesikhathi sokudlala, uzokhuthazeka kakhulu ukunaka imikhuba yakhe.
Gwema ukuqeqeshwa okunamandla . Into yokugcina oyifunayo ukufundisa inja yakho ukuthi ibe novalo noma yesabe wena nabanye abantu.
Uma kwenziwa kahle, ukuqeqeshwa kweMastiBull kuzosakaza amandla ohlobo futhi kuqinise isikhundla sakho njengenja ephezulu.
Amakilasi wokulalela imidlwane angasiza ukubeka isisekelo esihle seBandogge encane, futhi kuzoqala ukuzibandakanya kwabo ngonyawo lwesokudla.
Njengoba i-Hercules yakho enemilenze emine ikhula, ungabheka izinhlobo zokuqeqeshwa ezinamandla kakhulu. Ngofuzo lwabo olusebenzayo nolugadayo, lolu hlobo uhamba phambili ngokudonsa isisindo, ukulandelela, umsebenzi wamaphoyisa, kanye nokuqeqeshwa ngokwelashwa !
Bheka le vidiyo yeAmerican Bandogge esebenza ekuqeqesheni ukuvikela. Akagcini nje ngokuzijwayeza lokho azalelwa ukukwenza, kodwa futhi uvumelana ngokuphelele nomphathi wakhe sonke isikhathi.
Into ebaluleke kakhulu okufanele uyikhumbule yilokho ungumholi wepakethe . IMastiBull yakho idinga ukukubona njengomphathi futhi themba ubuholi bakho. Ukuphepha kwenja yakho nabantu abaseduze kwakho kuncike kuyo.
Kungaba nzima ukukholelwa, kodwa Ukugcinwa kwe-American Masti-Bull akubizi ngokweqile .
Uma kuqhathaniswa sonke isikhathi namandla ozochitha ekuqeqesheni, ukugcina impilo nokubukeka kwe-Bandog yakho kungukuhamba epaki.
Ukuzilungisa: ukuxubha nokugeza i-American Mastiff yakho
Ama-bandogges akhona ama-shedders alinganiselayo . Sebenzisa ibhulashi lenjoloba, njenge igilavu ​​yokuzilungisa , Izikhathi ezi-2 ukuya kwezi-3 ngeviki ukususa uboya obuxegayo noma obufile. Zisule ngendwangu ehlanzekile ukukhipha ngempela ukukhanya kwejazi lazo.
Lezi zinja zikhona aziwa ngokuthi uvuza amathe bese uthola iphunga elincane kepha melana nesifiso sokugeza i-pooch yakho kaningi kakhulu.
Uma i-Bandog yakho inemibimbi, sebenzisa i- inja sula noma indwangu emanzi ukuhlanza phakathi kwesikhumba sakhe. Kungasiza ukumnikeza iphunga elimnandi ngaphandle kokomisa uboya bakhe.
Izipikili zezipikili zingenzeka njalo ngenyanga noma ngaphezulu, kepha nsuku zonke ukunakekelwa kwamazinyo ilungile. Uma ukusondelana nobuntu ngomhlathi omkhulu kangako akuyona inkomishi yakho yetiye, hlela ukuxubha amazinyo abo kanye noma kabili ngesonto, okungenani.
Ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili ukondla i-Bandog yakho, kufanele sisho lokho kuzilungisa ngempela idinga ukwethulwa ebuntwaneni.
Ngaphandle kokuthi ufuna inja engamakhilogremu ayi-100 egijima i-amok ngesikhathi sokugeza noma ukukhahlela izipikili zezipikili, lokho kuyikho.
Ukugcina isisu sakho seBandog sigcwele
Izinja ezinkulu ziyadla kakhulu . Izidingo zakho ze-American Mastiff 4 kuya ku-5 izinkomishi lokudla nsukuzonke.
Hlukanisa leli nani libe yizidlo ezimbili, futhi ubheke ukudla okusheshayo ngoba lokhu kungakhuphula izingqinamba zezempilo. Bheka kwi izitsha zokudla okuphansi uma izikhafu zakho zeMastiBull phansi kwe-kibble yakhe.
La ma-droolers anzima omile njalo futhi kuyaqabukela uphuze amanzi afakwe emanzini. Ukunikeza i-Bandog yakho ngamanzi ahlanzekile, ahlanzekile kungazwakala njengomsebenzi wesibili, kodwa bazowuthokozela umzamo wakho.
Ngabe amaBandogges adinga ukuzivocavoca okuningi?
AmaBandogge Mastiffs asebenza kahle. Azidingi ngempela igceke elikhulu, kepha zingalimaza ngaphandle komsebenzi ojwayelekile. Hlela Imizuzu engama-45 kuya ehoreni eli-1 yokuzivocavoca nsuku zonke ukuze bangaphumuli.
I-Bandog yakho izothokozela izindlela eziningi zomdabu zokuzivocavoca, kepha kungenzeka ingabi ngamakhandidethi amahle emapaki ezinja noma enkulisa.
Ngokuhambisana naleyo migqa, vumela kuphela i-Bandog yakho ukuthi yelule imilenze yabo uma ingaphakathi kocingo olude, olunenja yokuqinisekisa inja.
Lolu akulona uhlobo lwe-fido ofuna ukukhululeka. Awufuni ukuba nesibopho senja yakho ukulimala noma ukulimaza omunye umuntu.
Kusekhona izindlela eziningi zeMastiBulls zokushisa amandla, njenge ukubhukuda noma imidlalo yama-puzzle . Imisebenzi enomthelela ophansi efana nalena iphelele ngesikhathi sobuntwana kanye nokuguga lapho amalunga akho kaMasti-Bull ezwela kakhulu.
Ezinye izindaba ezinhle ukuthi amaBandogges angathanda futhi avikele umndeni wakho isikhathi eside. Ngesilinganiso seminyaka yokuphila Iminyaka eyi-10 , bazoba khona isikhashana.
Futhi manje, izindaba ezimbi: zinamandla njengamaBandogs, azinqotshwanga. Lezi zindawo zokuphehla ugesi zibhekiswe ezinkingeni zezempilo ezizalanayo ezinkulu, zombili ezingavikeleka futhi ezingenakugwenywa.
Izimo zofuzo uMasti-Bull wakho angazizuza njengefa ziyizo autoimmune thyroiditis , umdlavuza, isithuthwane, izifo zamehlo, njenge-progressive retritis atrophy, hip and elbow dysplasia, izinkinga zesikhumba.
Esinye isifo esijwayelekile sithi ukuqunjelwa noma isisu esishubile-i-volvulus . Kuzwakala njengokukhathazeka kwezempilo okumnene kulolu hlu, kepha empeleni kusongela impilo. Ikhula lapho inja yakho inegesi eningi esiswini sayo.
Lokhu kungadala ukuthi isisu siphenduke futhi sinqume ukunikezwa kwegazi ezithweni ezibalulekile.
Kudinga ukwelashwa ngokushesha, ngakho-ke funda izimpawu futhi lungela ukwenza ngokushesha uma usola ukuthi iMastiBull yakho ihlushwa yilesi simo.
AmaBandogges, kanye nezinye izihlobo zabo zeMastiff, banakho ukubekezelelana okuphezulu kobuhlungu , ngakho-ke ungahle ungazi khona manjalo uma belimele noma bezizwa bengaphilile.
Uma wazi kangcono ubuntu nokuziphatha kwenja yakho, uzokwazi kangcono ukutshela lapho okuthile kungasebenzi.
Thatha izinyathelo zokuzivikela, futhi, njengokugcina isikhumba sabo sihlanzekile futhi somile futhi sibayeke baphumule ngemuva kokudla noma ukuvivinya umzimba. Hambisana nokuvakashelwa njalo kwezilwane, kanye isibungu , ukwelashwa ngamazenze, nemikhaza.
Njengezinye izinja zakwaMolosser, iAmerican Bandogge iyi- uhlobo olunempikiswano . Banjalo okuvame ukubonwa njengokulwa nokungazinzi , okuholela kwezinye izindawo ukuba zivimbele ngokuphelele.
IRomania, iSwitzerland, nezingxenye ezithile ze-United States kuvinjelwe umthetho Ubunikazi beMastiBull. Ngokwengeziwe, ezinye izakhiwo zokuhlala noma ama-HOA anemigoqo yokuzalanisa endaweni engakuvimbela ekubeni ne-Bandog emagcekeni.
Uma wenze ucwaningo futhi ungaba ngumnikazi weBandog Mastiff ngokusemthethweni endaweni yakho, sekuyisikhathi sokuqala ukonga. Intengo yenjanyana yaseMelika Bandogge ingakhuphukela kufinyelela ku- $ 2500 .
Awunantshisekelo yokukhipha imali engaka? Ungahlala ukhulula iMasti-Bull. Ukuthola eyodwa yokutholwa kungaba lula kunalokho ucabanga.
Abazalisi baseMelika Bandogge
Imvamisa, lapho abantu bedlula kubalimi noma ezindlini zezinja, bayazi uzalo lomdlwane wabo. Ukuthenga i-Bandog kuyinto ehlukile, noma kunjalo.
Ngoba izinhlobo eziningi kakhulu zingakha i-American Bandogge, izama ukuthola uhlobo lwegazi lomntwana wakho ngqo kungenzeka kungenzeki .
Hlangana noBagheera, i-Bandog - Umthombo wesithombe
Iningi lezinja hlanganisa izinhlobo ezi-2 kuye kwezi-3 ukudala inguqulo yabo ye-American Bandogge Mastiff.
Kufanele bakwazi ukwethula kumama nobaba wakho kaMasti-Bull kodwa ungamangali uma benolwazi olunqunyelwe kwizizukulwane ezedlule.
Noma iMastiBull yakho inesihlahla somndeni esiyimfihlakalo, Izindlwana ezibhekele ezempilo kufanele zikunikeze isiqinisekiso sezempilo yengane yakho iBandog nabazali bayo.
Ngendlela, amarekhodi ezokwelapha noma izitifiketi akufani njengokuhlolwa kwezilwane.
Ufuna ubufakazi bokuthi inja yakho, kanye nomndeni wayo osheshayo we-canine, awuthwali izimo ezinzima zempilo.
Ukuvakasha kwezilwane ezibalulekile kubalulekile, kodwa AKUYONA indawo yokuhlolela izifo zofuzo.
Uzophinda ufune ukubuza abangahle babe ngabazalisi ngalokho abakwenzayo ukuhlangana nodoti abasha.
Ngokushesha nje lapho bekwazi, imidlwane ye-Bandog kufanele ivezwe ekubukeni okusha, imisindo, nephunga. Ngokufanelekile, le nqubo izoqala ngaphambi ingane yakho ihamba nawe futhi kufanele iqhubeke impilo yayo yonke.
Ngakho-ke, ungayithenga kuphi i-American Bandogge? Naba abalimi abambalwa ukuze uqale usesho lwakho:
I-American Sentinel K9 (UJackson, MS)
Isazi se-K9 (UFranklinton, NC)
IBlasco Family Bulldogs (INI)
Ungahlola futhi amakhasi we-Facebook, njenge Ama-Mastiffs ase-West Coast eNevada, ukubona ukuthi banayo yini imidlwane yaseMelika Bandogge edayiswayo.
Ukutakula i-American Bandogge
Akuwona wonke umuntu okwazi ukuphatha amaBandogs nabazala bawo baseMolosser. Ngokudabukisayo, lapho abantu beluma ngaphezu kwalokho abangakuhlafuna, izinhlobo ezinamandla ezifana nalezi zingagcina sezikhosele noma zitakule.
Kwesinye isikhathi, isimilo senja sifakazela ukuthi sikhulu kakhulu. Kwezinye izimo, umthwalo wezezimali awutholakali.
Uma ukhetha ukwamukela, lungela ukusebenza kanzima kancane ukuqeqesha iMastiBull esindisiwe futhi uthole ukwethenjwa kwayo . Ukuntuleka kokuqeqeshwa okufanele noma ukuhlukumezeka ngenxa yokunikelwa kungakhulisa imikhondo yabo yokuqapha, yokuvikela.
Izindawo zokukhosela zendawo zigcwele izinhlobo ezifana ne-Bandogge Mastiff. Lezi izinketho ezinhle uma ungakhethi ukuthi uthola hlobo luni lweBandog.
Uma ufuna ukusondela eduze kweqiniso laseMelika iMasti-Bull ngangokunokwenzeka, cwaninga ngezikhungo zokwamukela izingane ezizalelwa eMolosser, ezinjengalezi:
Ama-Mastiffs aya kuMutts (Chambersburg, PA)
IBullpen Way Station & Indawo Engcwele (ENorwood, GA)
Futhi kunezinhlangano, njengeThe Inhlangano yaseMelika yeBullmastiff , ebheke lawa ma-canine aze athole umnikazi omusha.
I-American Bandogge Mastiff iyi-canine enkulu ephethwe kahle abanikazi abanolwazi kuphela . Uhlangothi lwabo olumnene, olunembile lubekelwe kuphela amalungu epakethe, futhi wonke umuntu uhlangatshezwa nge- umvikeli ongesabi .
TO inja yeqiniso ye-alpha , UMasti-Bulls ngeke aphendule kumholi ongenazinqumo. Kuzofanele uthole le nhlonipho enqamulelayo. Ukulwela inselele?
Ngabe uthola i-American Bandogge isabisa noma ithakazelisa? Mhlawumbe bobabili? Sitshele ukuthi kungani kumazwana!
Izinwele Ezinde Ezinezinwele - Umhlahlandlela Ophelele Wokuzala
uhlobo olungavamile lwama-pit bull
inani eliphelele lokuzala le-french bulldog
usayizi wokuxubana we-blue heeler
impumulo ebomvu imbobo yenkunzi yensikazi